2017 - Page 3 of 3 - Xalayaa
Afuura Harmee isa Dhumaa!!
27 Jan 2017 Kan maxxanse Odaa Gurree
Afuura Harmee isa Dhumaa ~Odaa Gurree-tiin Ani mucaa hangafaa ti. Obboleettii koo ishee xiqqoo faana waggaa lama qofa wal caalla. Kan dhalannee guddanne Oromiyaa Lixaa, Aanaa Giddaa Ayyaanaa, baadiyyaa keessatti. Akkuma dhala qote bulaa kamuu guddatutti dhalannee jireenya baadiyyaa dhamdhamuu eegallee...
Faayidaa Waa Dubbisuu – Beekan Gulummaa Irraanaa-tiin
23 Jan 2017 Kan maxxanse Naa'ol
FAAYIDAA DUBBISUU!! ~Beekaan Gulummaa Irraanaa “Inni ‘Maannew’ jennaan Ani maal inniin jedhe Afaan keenya waldhabe Akka qadaada qabee”… .....jedha uummanni naannoon ani itti dhaladhee yeroo Nafxanyaa naannoosaa qubatte qeequ... Yaa Uummata Oromoo, har’a waanan dubbisaa ooleef faayidaan...
MANNI SHAAYII DUBBII NATTI DHALE!
23 Jan 2017 Kan maxxanse Odaa Gurree
MANNI SHAAYII DUBBII NATTI DHALE! ~Odaa Gurree Seenaan koo akkana yaa lammiiwwan koo. Ani maqaan koo Baatiree Gannaalaan jedhama. Aanaa Baakkoo Tibbee, Magaala Laga Dhoqqee(Tibbeen) dhaladhe. Hamman dhaladhee mooyyee tarkaanfadhutti jiruu fi jireenyuma maatiin itti na jiraachisan keessan jiraadhe....
SHAGGEE WALIIN SAAWWA TIKSINEEN YAADE
22 Jan 2017 Kan maxxanse Odaa Gurree
Shaggee waliin saawwa tiksineen yaade ~Odaa Gurree Ani Likkaasaa jedhama amma biyya Germany Magaalaa Munich jiraadha. Jiruun baqaa silaa gadhee dha. Fuutee namaan joorti. Biyya koo Oromiyaa irraa dhiibbaa gabroomfataan osoo hin bahiin dura gaafa ijoollummaa Goodaa Haroo jedhamtu iddoo anii fi ijoolleen...
Sii Hinaafsisuuf kan Biraa Jaaladhee
22 Jan 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Dhiifama naa godhii Mangee koo Akkam fayyaa jirta? Nagaa keeti? Jaalallee koo kan akka lubbuu kootitti sijaaladhu Mangistuu dhaaf. Mangee koo, jaalallee koo yeroon sin jedhuu sitti hin bitaacha'iin. Ani har'as baayyen sijaaladha. Akkamitti najaalatta nan hin jedhiin. Kun sammuu koo na dhukkubsa. Mangee...
Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! – Xalayaa Jaalalaa
09 Jan 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa'e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka'u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Hardha garuu,...
Diraama Dheebuu Rarra’e Hafee Jira
01 Jan 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Diraama Dheebuu Kutaa 81ffaa hin jiru! Diraama Dheebuu televishiini Oromiyaa irra kan darbaa ture torbaan darbe kutaa 80ffaa irratti xumuramuunsaa dhaabbatni Raadiyoo fi Televishiini Oromiyaa nuuf gabaasaniiru. Diraama Dheebuu Yaadannoo taatee jirti jechuu dhan televishiina irratti dabarsanii turan....